Mandoko fanovana eny an-dalambe ny ‘Art Lords’ ao Afghanistan · Global Voices teny Malagasy
Samy voasinton'ny hafatra sosialy tsy misy marimaritra iraisana na namana na fandrahonana
Voadika ny 31 Mey 2019 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, ਪੰਜਾਬੀ, 日本語, Nederlands, English
Omid Sharifi miasa. Sary avy amin'ny Art Lords.
Nanomboka tamin'ny nofinofin'ireo ankizilahy Kabuli roa, Omid Sharifi sy Kabir Mokamil, izay te-hanarina an'i Afghanistan, “mivoaka amin'ny mpangalatra sy ny mpanao kolikoly” izany. Lasitra fanaovan-tsary efa miandry ireo sehatra atao fahirano ao amin'ny renivohitra Kabul.
Izany no nahaterahan'ny Art Lords tamin'ny taona 2015, izay Fikambanana ara-java-kanto sy ara-kolontsaina Afgàna .
“Te hanomboka hetsika ifotony ho amin'ny fanovàna ny fijerin'ny daholobe izahay – hetsika izay mety hahatonga ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra,” hoy i Sharifi tamin'ny Global Voices nandritra ny resadresaka tao amin'ny biraon'ny vondrona.
Manampy ny olona hanontany ny kanto an-dalambe, hoy ilay mpanakanto 31 taona.
“Amin'ny faran'ny andro, ny olona ihany no afaka mihazona ny mpanao kolikoly ho tompon'andraikitra!”
Rindrina loaky ny baomba sy ny any ankoatrany
Nanapa-kevitra i Sharifi sy Mokamil fa tsy maintsy ho lasa mahafinaritra indray i Kabul, tanàna iray mahafinaritra fahiny izay ravan'ny ady nandritra ny taompolo maro.
Ny tanjon'izy ireo voalohany hanaovana zavakanto an-dàlambe dia ny rindrina loaky ny baomba izay nanenika ny renivohitra mba hiarovana ny fotodrafitrasa niharan'ny fipoahana.
Fa mba hahatonga ny hafatr'izy ireo hipaka manerana ny firenena, dia tsy maintsy niitatra ivelan'ny tanàna ny vondrona. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanitatra ny asany tany amin'ireo faritany 17 hatramin'ny 34 ao Afganistana izy ireo, anisan'izany ireo marobe izay mbola tsy tena milamina azo antoka tsara.
Hatramin'izao izy ireo dia nahavita sary amin'ny rindrina miisa 600 teo ho eo, raha tamin'ny taona lasa fotsiny, dia nametraka fampisehoana teatra an-dalambe maherin'ny 50 izy ireo.
Mahita ny “Art Lords” ho toy ny “miaramila eo amin'ny laharana voalohany amin'ny ady amin'ny tsy rariny” i Sharifi. Anisan'ny lohahevitra ankafizin'ny vondrona ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, ny zon'ny ankizy ary ny ady amin'ny grefy
Mangalatra amin'ny vahoaka mahantra eto an-tany ireo orinasan'ny fifandraisandavitra mahamenatra ao #Afghanistan. Tsy miafina amin'Andriamanitra sy ny mason'ny vahoaka ny kolikoly#Iseeyou #corruption.
Anisan'ny hetsika amin'ny #ReclaimKabul, lalana 50 manerana an'i Kabul no nomena ny anaran'ireo vehivavy Afgàna mahery. Ny tanjon'ity hetsika ity dia ny hanasongadinana fa, tanànan'ny tsirairay i Kabul fa tsy an'ireo manampahefana mpanao kolikoly, ireo mpitarika mpiady ary ny jiolahy. Bodoy i Kabul amin'ny fitsinjovana ny hafa, fitiavana ary hatsaram-panahy.
Ny teti-bolan'ny tetikasan'ny Art Lords dia avy amin'ny loharano tsy miankina, ny fikambanana iraisam-pirenena ary ny governemanta vahiny, saingy fanamby hatrany ho an'ny fikambanana izay ahitana mpiasa maharitra 17 sy mpiasa tapak'andro 41 ny fitadiavam-bola.
Ny sasany amin'ireo fidiram-bolan'ny tetikasa dia avy amin'ny fivarotana kafe ao ambanin'ny biraon'ny Art Lords, izay toerana hanaovana hetsika ara-kolontsaina malaza,
‘Nisy ny fandrahonana’
Miteraka olana ho an'ny Art Lords indraindray ny fifanoheran'ny manampahefana manoloana ny tetikasa, indrindra fa amin'ny ambaratonga ambany
Saingy manana fifandraisana matotra amin'ny fiarahamiasa ao amin'ny governemanta ihany koa ny vondrona, ary misitraka fiarahamiasa amin'ireo sekoly sy oniversite.
Mahatalanjona foana ny mandoko miaraka amin'ny mpianatra. Ao amin'ny Oniversite Kardan izahay amin'ity herinandro ity.
Tsara tarehy ireo. Fanantenana ho an'ny #Afghanistan! maroloko! Ary manantena ny hahita ny lokon'ny @ArtLordsWorld any amin'ireo sekoly #Afghan rehetra, anisan'izany ny Sekoly Ambony Rabia-e-Balkhi izay nandehanako nandritra ny taona vitsivitsy.
Nantsoin'i Sharifi hoe “hetsi-panoherana ny mpitarika Taliban Mullah Omar, ny kolikoly ary ny zava-mahadomelina” ny asan'ny tarika.
Nahatonga ny Art Lords nahazo fandrahonana mivantana farafahakeliny im-balo ity fomba fijery sivika mazava ity, hoy izy.
Saingy manamafy ihany koa i Sharifi fa amin'ny lafiny sasany, tsy misy hafa amin'ny an'ny olon-tsotra hafa ao amin'ny firenena izay “zava-misy iainana tahaka ny fihinanana, ny fisotroana ary ny torimaso ny olana ara-piarovana” ny fiainan'izy ireo
“Misy ny fandrahonana, tena tahotra ary manana olana goavana ara-tsaina daholo izahay rehetra, saingy inona no safidy anananay?” manontany izy.
“Inona no azontsika atao ankoatra izany?”
Sary hosodoko vaovao amin'ny rindrina: Manohitra ny fanambadian'ny ankizy i #Afghanistan
Art Lords tsy voasakan-tsisintany?
Nankatoavina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny asan'ny Art Lords ary vao haingana no voatendry tamin'ny Loka 2019 ho an'ny Fahalalaham-pitenenana tamin'ny sokajy “zava-kanto”, izay resin'ilay Kiorda mpanao politika mpanao hosodoko sy mpanao gazety, Zehra Doğan ny vondrona.
Amin'izao fotoana izao, dia mikasa hivondrona ho fikambanana iraisam-pirenena miasa ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety any Azia Atsimo sy any amin'ny firenena Afovoany Atsinanana ny vondrona.
Mifamatotra amin'ny fahitana mba hahazoana vola maharitra ny tetikasa hanokatra sampana Art Lords any Etazonia Amerika sy Afghan Art Gallery any Dubai.
Tany am-piandohan'ity volana ity, niasa tamin'ny majikan'izy ireo nandritra ny fampirantiana tao amin'ny tanàna Soisa ao Lugano ny Art Lords.
Rehefa manana fo ? ny rindrina, dia mahatonga ny olona handihy.
Saingy ny vahoakan'i Afghanistan hatrany no vahoaka mpanohana ny vondrona, izay nazava tsara ny fangorahana lalina teo amin'i Sharifi nandritra ny tafatafa niarahany tamin'ny GV:
Mankafy ity asa ity ny olon-tsotra. Ho azy ireo ny zavakanto. Tsy mbola nanana sary hosodoko teo amin'ny rindrin'izy ireo mihitsy izy ireo. Tsy mbola nandray borosy fandokoana mihitsy ny tanan'izy ireo. Natokana hatrany ho an'ny 5% amin'ireo saranga ambony ao Afganistana – ny fianakavian'ny mpanjaka (teo aloha) sy ny mana-kaja avokoa ny zavakanto. Saingy ho an'ny olon-tsotra ny asanay. Tianay izy ireo handray anjara amin'izany.
Zeorzia 2 andro izay